Yandex | October 2019
Yandex Browser ကိုအတွက် Installing extension များ
လူကြိုက်အများဆုံးရုရှားဘာသာစကားသည်အင်တာနက် browser များတစ်ခုမှာစပိုင်းတွင်သင်တစ်ဦးအဆင်ပြေ surfing ဘို့လိုအပ်တယ် tools တွေ၎င်း၏အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်ပါရှိသည်နေကြသည်။ သို့သော် Yandex မှတစ်ဦးကို Web browser ၏အခြေခံလုပ်ဆောင်ချက်မလုံလောကျပါက install လုပ်ရန်နှင့်ယနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာဆွေးနွေးကြမည်သည့်ဘယ်လိုချဲ့ထွင်, မှတဆင့် "pumped" နိုင်ပါသည်။
အဆိုပါ Yandex မေးလ်စာသားတစ်ခုချင်းစီကိုစာ၌လိုအပ်သောဒေတာများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။ ဥပမာ,, သင့်ပရိုဖိုင်းကိုမှ link တစ်ခုနှုတ်ဆက်ဖြစ်နိုင်သည်သို့မဟုတ်စာတစ်စောင်၏အောက်ခြေတွင်ရေးထားသမျှသောမည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုပေး။ ကဖန်တီးရန်တစ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလက်မှတ် Create, သင်အောက်ပါလုပျဆောငျရမညျ: မေးလ် settings ကိုဖွင့်ပါနှင့် "ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များ, လက်မှတ်, ပုံတူ" ကိုရွေးချယ်ပါ။
Yandex Browser ကိုအတွက် Adobe Flash Player ကိုအဆင့်မြှင့်တင်ရန်လုပ်နည်း
Adobe Flash Player ကို - တစ်ဘရောက်ဇာကို plug-in ကိုကြောင်း flash ကို-applications များနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်နေပါသည်။ Yandex ခုနှစ်တွင် Browser ကို default အနေဖြင့် installed နှင့် enabled ဖြစ်ပါတယ်။ Flash Player ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့အတွက်နှင့်ပိုပြီးတည်ငြိမ်, ဒါပေမယ့်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးအကြောင်းပြချက်များအတွက်သာသည် Periodic မွမ်းမံရန်လိုအပ်သည်။ သင်သိသည့်အတိုင်း plug-in ၏ဗားရှင်းအဟောင်းကတဆင့်အလွယ်တကူဗိုင်းရပ်စ်ကိုထိုးဖောက်ကြောင့်အသုံးပြုသူတစ်ဦး၏ကွန်ပျူတာကိုကာကွယ်ရန်ကူညီပေးသည် update လုပ်ဖို့။
စနစ် Yandex ငွေအတွက်ဝယ်ယူမှု, ဝန်ဆောင်မှုများသို့မဟုတ်လွှဲပြောင်းငွေပေးဆောင်နိုင်ရန်အတွက်, သင်, တစ်နည်းထဲမှာ, ပိုက်ဆံအိတ်သင့်အီးမေးလ်အကောင့်ကိုဖွင့်ဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ Yandex ပိုက်ဆံအိတ် replenish ဖို့နည်းလမ်းတွေကိုကြည့်ပါလိမ့်မယ်။ , refill ကိုသွားမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်ထောင့်၌သင်တို့၏ပင်မစာမျက်နှာ Yandex ငွေကိုသွားစေရန်, (ဒီ button ကိုပုံရိပ်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့တစ်ဦး "+" icon လေးအဖြစ်ပြသနိုင်ပါသည်) "Add" ကိုကလစ်နှိပ်ပါ။
အဆိုပါ Yandex Browser ကိုအတွက်ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲကိုပြောင်းလဲရန်
ကျနော်တို့ကို browser ကနေတချို့ဖိုင်တွေဒေါင်းလုပ်လုပ်။ ဒါဟာဓာတ်ပုံများ, အသံ, ဗီဒီယို, စာသားစာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားဖိုင်များကိုနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်သူတို့အားလုံးဖိုင်တွဲ "Downloads" ထဲမှာသိမ်းထားပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်အမြဲဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်ဘို့လမ်းကြောင်းကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ အဆိုပါ Yandex Browser ကိုအတွက်ဒေါင်းလုပ်ဖိုင်တွဲကိုပြောင်းလဲဘယ်လိုနေသလဲ?
Yandex Disk ကိုရှင်းလင်းနည်း
Cloud storage သိုလှောင်တဲ့ tool တစ်ခုအဖြစ်လူကြိုက်များနှင့်အင်တာနက်ဘရော့ဘန်း access ကိုရှိခြင်း၏စည်းကမ်းချက်များ၌ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ hard drive တွေအနေနဲ့အခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော်မည်သည့်ဒေတာသိုလှောင်မှုနှင့်ဝသကဲ့သို့, Cloud သိုလှောင်မှုဖိုင်တွေမှီခဲ့တာဘဲလျက်, မလိုအပ်သောစုပြုံကြတယ်။
Yandex Drive ကိုအပေါ်တစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်ဒေတာ
ဟူသောဝေါဟာရကို "ထပ်တူ" မိုဃ်းတိမ်စင်တာ Yandex Disk ကိုမှဒေသခံကွန်ပျူတာများ၏အပြန်အလှန်အဘို့တည်ရှိကြောင်း။ သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ install လုပ်ထားတဲ့ application ကို, တက်ကြွစွာ synchronizes တစ်ခုခုနှင့်အတူတစ်ခုခုလုပ်ဖို့။ ရဲ့အဘယ်အရာကိုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ကအဘို့ဖြစ်၏ကြည့်ရှုကြပါစို့။ ဖျော်ဖြေလုပ်ရပ်များ (တည်းဖြတ်, ကူးယူသို့မဟုတ်ဖျက်မှု) file သည့်အခါအပြောင်းအလဲများကိုမိုဃ်းတိမ်၌ဖြစ်ပေါ်: ထပ်တူ၏နိယာမအောက်ပါဖြစ်ပါတယ်။
Yandex Disk ကိုညှိမရလျှင်အဘယ်အရာကို
Folder ကို contents တွေကို Yandex Drive ကိုတစ်ပြိုင်တည်းချိတ်ဆက်နေဖြင့်ဆာဗာပေါ်တွင်ဒေတာတွေနဲ့တိုက်ဆိုင်။ ဒါကြောင့်အလုပ်မလုပ်ပါဘူးလျှင်အက repository ကို၏ဆော့ဖ်ဝဲဗားရှင်းကို အသုံးပြု. ၏ရည်ရွယ်ချက်အနိုင်ယူ။ ထို့ကြောင့်အခွအေန၏ဆုံးမပဲ့ပြင်တတ်နိုင်သမျှအမြန်ဆုံးကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ drives တွေကိုထပ်တူနှင့်ထိုပြဿနာကိုဖြေရှင်းဘို့မိမိတို့ဖြေရှင်းချက်နည်းလမ်းနှင့်အတူပြဿနာများ၏အကြောင်းတရားများသည်၎င်း၏ဖြစ်ပျက်မှုများအတွက်အကြောင်းပြချက်အပေါ်မူတည်ပါလိမ့်မယ်။
Yandex အတွက်အကောင့်တစ်ခု Create
Yandex ဂီတ, ရှာမေးမြန်းချက်များခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ, ငွေပေးချေမှုအောင်နှင့်အခြားသူများကိုနားထောင်, ဖိုင်တွေကိုရှာဖွေခြင်းနှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အဘို့အလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအမျိုးမျိုးပေါင်းစပ်သောအကြီးဆုံးအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အပြည့်အဝ Yandex ၏အင်္ဂါရပ်အားလုံးအကျိုးရှိစွာအသုံးချနိုင်ရန်အတွက်, သင်, တစ်နည်းထဲမှာ, စာတိုက်ပုံး၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်အပေါ်အကောင့်တစ်ခုဖန်တီး, ဒါမှမဟုတ်ရပါမည်။
အဆိုပါ Yandex Browser ကိုအတွက်ဘာသာစကားပြောင်းပေးဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Yandex Browser ကို install လုပ်သည့်အခါက၎င်း၏အဓိကဘာသာစကားသင်၏ operating system ထဲမှာထားကဲ့သို့တူညီသောသတ်မှတ်ထားသည်။ အဆိုပါ browser ၏လက်ရှိဘာသာစကားသငျသညျမပျော်ရွှင်ဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သင်သည်အခြားမှပြောင်းလဲချင်လျှင်၎င်းသည်အလွယ်တကူ setting များကိုမှတဆင့်လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။ ဤဆောင်းပါး၌အကြှနျုပျတို့သညျခငျြတနှင့်အတူရုရှား Yandex Browser ကိုအတွက်ဘာသာစကားကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုသင်ပြပါလိမ့်မယ်။
Yandex Drive ကိုအပေါ်ဖိုင်တွေရှာဖွေဖို့ကိုဘယ်လို
Yandex Drive ကိုတွင်တစ်ဦးအဆင်ပြေမတ်ဖိုင်ရှာဖွေရေးပေးပါသည်။ အဆိုပါ algorithm ကိုအမည်, အကြောင်းအရာ, တိုးချဲ့မှု (ပုံစံ) နှင့် metadata ခြင်းဖြင့်ဖိုင်များကိုရှာဖွေခွင့်ပြုထားသည်။ နာမတော်ဖြင့်ရှာရန်နှင့် Yandex Disk ကိုထိုကဲ့သို့သော (ကိုးကားမပါဘဲ) "ဟုအဆိုပါ Acronis ညွှန်ကြားချက်" အဖြစ်သာနာမတော်ကိုအမှီ ပြု. သတ်မှတ်ခြင်းအားဖြင့်ဖန်ဆင်းနိုင်ပါတယ်ရှာဖွေရေးတိုးချဲ့။ စမတ်ရှာဖွေရေးဤစကားများအားမဆံ့သမျှဖိုင်တွေနဲ့ဖိုင်တွဲများ, တွေ့။
အဘယျသို့လြှငျဘရိတ် Yandex Browser ကို
အစာရှောင်ခြင်းနှင့်တည်ငြိမ်စစ်ဆင်ရေး - ဆိုခေတ်သစ်ကို web browser ၏အခြေခံစံချိန်စံညွှန်းများ။ လူကြိုက်များအင်ဂျင် Blink အပေါ် running Yandex Browser ကိုတစ်ဦးအဆင်ပြေ surfing ပိုက်ကွန်ပေးပါသည်။ သို့သော်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပရိုဂရမ်တွင်အမျိုးမျိုးသောစစ်ဆင်ရေး၏အမြန်နှုန်းလဲကြလိမ့်မည်။ များသောအားဖြင့်ဒီအမှားကွဲပြားခြားနားသောအသုံးပြုသူများအတွက်တူညီတဲ့အကြောင်းပြချက်ဖြစ်ကြသည်။
Yandex Disk ကိုအတူဒေါင်းလုတ်လုပ်လုပ်နည်း
သင်လုံခြုံစွာအချက်အလက်တွေကိုသိမ်းထားခြင်းနှင့်အခြားအသုံးပြုသူများနှင့်အတူဝေမျှခွင့်ပြုကတည်းက Cloud ကိုဝန်ဆောင်မှု Yandex Disk ကိုကြောင့်ယင်း၏အဆင်ပြေအများအပြားနှင့်အတူရေပန်းစားသည်။ သိုလှောင်ဖိုင်များကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ခြင်း - အလွန်ရိုးရှင်းသောလုပ်ထုံးလုပ်နည်းရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူနှင့်အတူနေသောသူတို့ကိုအကျွမ်းတဝင်မဟုတ်ဤဆောင်းပါးကိုလိုအပ်သောညွှန်ကြားချက်များရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။
Yandex Drive ကိုအပေါ် volume ထဲမှာအပွား
ပုံမှန်အားဖြင့်အသီးအသီးအသုံးပြုသူအသစ် Yandex Disk ကိုအာကာသ၏အသုံးပြုမှုကို 10 GB အထိရရှိနိုင်ပါသည်။ ဤငွေပမာဏတခုအစဉျအမွဲသက်တမ်းအတွက်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်နှင့်လျော့ဘယ်တော့မှပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်မရတောင်မှအများဆုံးတက်ကြွစွာအသုံးပြုသူ 10 GB အထိယင်း၏လိုအပ်ချက်များအတွက်မလုံလောက်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုနှငျ့ရငျဆိုငျနိုင်ပါသည်။
Yandex Disk ကိုသုံးစွဲဖို့ကိုဘယ်လို
Yandex Disk ကို - RuNet အတွက်ရေပန်းအစားဆုံးသောမိုဃ်းတိမ်န်ဆောင်မှုများပါတကား။ အဆိုပါ discs တွေကိုတွင်သင်၏ဖိုင်များကိုသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်, ထို့အပြင်ဝန်ဆောင်မှုကိုသင်မိတ်ဆွေများနှင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်အတူလင့်များဝေမျှနှင့်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည်နှင့်ပြင်ဆင်ရန်စာရွက်စာတမ်းများ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ site ကို Yandex Disk ကို၏ဆောင်ပုဒ်အပေါ်ဆောင်းပါးတစ်ဦးစုဆောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာတွင်ဝန်ဆောင်မှုကို အသုံးပြု. အဘို့အသေးစိတ်ညွှန်ကြားချက်တွေ့လိမ့်မည်။
ကွန်ယက် drive ကိုအဖြစ် Yandex Disk ကိုချိတ်ဆက်ဖို့ကိုဘယ်လို
လူသိများသည်နှင့်အမျှ, Yandex Disk ကိုသင့်ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာတွင်ပေမယ့်သင့်ရဲ့ PC မှာအထူးဖိုင်တွဲထဲမှာမသာသင့်ရဲ့ဖိုင်များကိုစောင့်ရှောက်။ ဖိုင်တွေကိုကသိမ်းပိုက်အာကာသအတော်လေးကြီးမားရှိနိုင်ပါသည်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါဟာအစဉ်အမြဲအဆင်ပြေမဟုတ်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် WebDAV ထောက်ခံမှုနည်းပညာ Enable Yandex Drive တွင်, သင့် system ကို drive ပေါ်တွင်ကြီးမားသော folder ကိုစောင့်ရှောက်ရန်ဆန္ဒရှိကြဘူးတဲ့သူတွေကိုအသုံးပြုသူများအတွက်။
Yandex Browser ကိုများအတွက်ပိုတငျး: အ VC ကိုမှာ "ပန်းသီး" ၏ထုတ်ဝေရန်နှင့်အတူမှတ်တမ်းများ
အမြားအပွားကိုသိသကဲ့သို့, မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များအတွက်တစ်ဦးချင်းစီအသုံးပြုသူရဲ့လူမှုကွန်ယက် VKontakte အစာရှောင်ထွက်ချထားခဲ့ပြီးသည့်မိုဘိုင်း operating system icon ကို, ပြသထားတယ်။ ကို iOS, Android နဲ့ Windows Phone: ဒါဟာ3icon များရှိနိုင်ပါသည်။ သူတို့ထဲကမဆိုပို့စ်တစ် branded မိုဘိုင်း application ကိုမှတဆင့်ဖန်တီးခဲ့ကြောင်းပေးပြသနိုင်ပါသည်။
ငွေမရှိသော Yandex ပိုက်ဆံအိတ်ပေါ်ကြွလာလျှင်အဘယ်အရာကို
တခါတရံသူကသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ် Yandex ငွေရှည်စောင့်ဆိုင်းခဲ့ရသောပြောင်းရွှေ့ကြေးသို့မဟုတ် terminal ကို၎င်း၏လက်ကျန်ရှင်းတမ်း၏ပြီးစီးမှာမရောက်ရှိနိုင်, သငျသညျသူ့အကောင့်ထဲတွင်ငွေမစောင့်ခဲ့ဘူးကြောင်းဖြစ်ပျက်ဖြစ်နိုင်သည်။ ရဲ့ဒီပြဿနာတွေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ကြိုးစားကြပါစို့။ မပေးငွေ terminal မှငွေကြေးထောက်ပံ့မှုအခါသင်အားသွင်းဖို့ terminal ကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင် လာ. , ငွေကိုမလာဘဲ, သင်ထောက်ပံ့ data အားလုံးကိုမှန်ပြီးစစ်ဆေးမှုများကိုစောင့်ရှောက် terminal ကိုအတူပြဿနာတစ်ခုပေါ်ပေါက်ဖွယ်ရှိသည်။
Yandex Browser ကိုအပေါ် Flash Player ကို Install လုပ်ခြင်း
Adobe ကဘရောက်ဇာကနေ Flash Player ကိုတိကျမှန်ကန်ဖြစ် Flash ကို applications များလုပ်ကိုင်ဖို့လိုအပ်ပါသည်။ ယနေ့တွင်ငါတို့သည်သင်တို့၏ web browser ကို Yandex Browser ကိုအဘို့ဤအတွက် add-on ကို install လုပ်ဖို့ဘယ်လိုအကြောင်းအသေးစိတ်အတွက်စကားပြောပါလိမ့်မယ်။ installed နှင့် Yandex တွင်ထည့်သွင်းတိုးချဲ့ထည့်သွင်းစဉ်းစား Yandex Browser ကိုရန်အတွက် Adobe Flash Player ကို install လုပ်ရန်။
Yandex Disk ကိုကနေဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်မယ့် link ကို Create
Yandex Drive ကိုသုံးပြီးတစ်ခုမှာအားသာချက်သင့်ရဲ့သိုလှောင်မှုအတွက်ထားရှိထားတဲ့ဖိုင်တစ်ဖိုင်သို့မဟုတ်ဖိုင်တွဲ, ဝေမျှပေးနိုင်သည်။ အခြားအသုံးပြုသူများကိုတိုက်ရိုက်သင့်ရဲ့ disk ပေါ်မှာသူတို့ကိုသိမ်းဆည်းခြင်းသို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာကိုဒေါင်းလုဒ်နိုင်ပါလိမ့်မည်။ Yandex Disk ကိုနည်းလမ်းများစွာ၌သင်တို့၏ repository ကို၏တိကျသော contents တွေကိုမှ link တစ်ခုရယူလိုက်ပါဖိုင်များလင့်များဖန်တီးရန်နည်းလမ်းများ။